About Us | NEW BURMA MEDIA
New Burma Media, NBM is hosted by New Burma Foundation, NBF which is an NGO and founded in Tokyo, Japan and started at 24th April 2010 and officially announced at 26th April 2010. Our objectives are; to present our knownledges and information, as well as news media about Burma (aka Myanmar) to all people who love Burma and to support the country Burma and the people. In fact, we founded NBF with our Main Objective, “Our country must be the best beautiful country in near future”.
ခေတ်သစ်မြန်မာ ဖောင်ဒေးရှင်းပြုလုပ်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံအား ခေတ်မှီတိုးတက်ရန် အတွက် နိုင်ငံရေး၊ လူမှုစီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ကျန်းမာရေး၊ အနုပညာကဏ္ဍ အစရှိသည်တို့ကို လိုအပ် သလို တတ်နိုင်သမျှ ထောက်ပံ့ကူညီသွားရန်ဖြစ်ပါသည်။ အဓိကအားဖြင့် အဖွဲ့အနေဖြင့် အားလုံးပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်နိုင်မှုကို ဖန်းတီးပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။
ဂျပန်ရောက်မြန်မာများမှ စတင်တည်ထောင်ခဲ့သော လူမှုအကျိုးပြုအဖွဲ့ (Non-Government Organization) တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ဤအဖွဲ့သည် အလှူလိုအပ်သူကို ကူညီပေးမည့် ဖောင်ဒေးရှင်းတစ်ခု အဖြစ် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။ လှူဒါန်းခြင်းများတွင် မည်သူမဆို စေတနာသဒ္ဓါတရား ရှိသလောက် ပါဝင်လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။
ငွေကြေးမတတ်နိုင်သော သူများ၏ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး လုပ်ငန်းများအား တတ်နိုင်သလောက် ထောက်ပံ့ကူညီသွားပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး စသည် လိုအပ်ချက်တို့အလို့ငှာ ကူညီထောက်ပံ့ပေးရန်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောနိုင်ငံ အဖြစ် တည်ဆောက်နိုင်ရန် အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး တည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Home Office: New Burma Foundation, New Burma Media
#103, 2-1-46, Hyakunincho, Shinjuku, Tokyo, Japan.
Tel: +81-80-4472-8955 (int’l), 080-4472-8955 (local)
Fax: +81 -3-6233-8699 (int’l), 03-6233-8699 (local)
Email: newralwin@gmail.com newburmafoundation@gmail.com
Mobile Site: newburma.wordpress.com (compatible with iPhone, Android and Smartphones)
New Burma Media Main Contacts:
Edward Win – Project Leader (Founder)
Win Ko Ko Aung – Team Leader (Co-Founder)
Tel: +81 (0)80-5875-1301
Sein Lwin: Senior Advisor (Co-Founder) Tel: 090-6309-4216
Khin Aung Myint Associate Leader
Nay Aung, General Secretary nesuns@gmail.com Tel: 090-6342-8966
U Soe Win – Editor In Chief
U Soe Tint – Executive Media Officer soetint29@gmail.com
Nay Lin Htike – Social Media Officer
sanay.jp@gmail.com Tel: 080-4439-8860
Than Htut Win – Event manager
Min Min Oo – News Reporter
Naing Win – Office Manager